Princess Cruises ayaa mar kale ka qiratay dambiga kiiska wasakhowga saliidda
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » saaciday inay » Princess Cruises ayaa mar kale ka qiratay dambiga kiiska wasakhowga saliidda
Jebinta Wararka Safarka • saaciday inay • Warshadaha Warshadaha • News • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
Lahaanshaha sawirka Sven Lachmann oo ka socda Pixabay
Sannadkii 2016-kii, xukun lagu riday 7 eedeymo dambi ah ayaa keenay $40 milyan oo ganaax ah Princess Cruises - ciqaabtii ugu weyneyd ee abid abid ee ku lug leh wasakheynta markabka si ula kac ah. Iyada oo qayb ka ah heshiiska qirashada, maxkamaddu waxay amartay shan sano oo la kormeerayo Barnaamijka U hoggaansanaanta Deegaanka kaas oo u baahan hantidhawr madax-banaan oo ay sameeyeen hay'ad dibadda ah iyo kormeere ay maxkamaddu magacawday ee Khadadka dalxiiska ee Shirkadda Carnival, oo ay ku jiraan Princess Cruises, Carnival Cruise Line, Holland America Line, Seabourn Cruises, iyo AIDA.
Princess Cruise Lines ayaa mar labaad qiratay dambiga lagu soo oogay ee ku saabsan jebinta amar maxkamadeed Barnaamijka U Hogaansanaanta Deegaanka taasi waxay qayb ka ahayd shuruudaha xukunkii 2016 ee lagu xukumay wasakhaynta ula kac ah iyo dadaalka ula kac ah ee lagu qarinayo falalkeeda. Eedeymaha ay Princess qiratay dambiga ayaa ku saabsanaa Boqorada Kariibiyaanka.
Sida ku cad shuruudaha heshiis cusub oo qirasho ah oo lagu dhawaaqay Janaayo 11, 2023, oo ay soo saartay Waaxda Caddaaladda ee Mareykanka, Princess ayaa lagu xukumay inay bixiso $1 milyan oo ganaax ah oo dheeri ah waxaana mar kale looga baahan yahay inay qaado tillaabooyin hagaajin ah si loo hubiyo in barnaamijku socdo.
Heshiiska cusub ayaa ah jebinta labaad ee tijaabinta ee ka dhalatay heshiiskii qiraalka ee 2016. Sannadka 2019, Princess iyo shirkaddeeda waalid ee Carnival Corporation ayaa lagu amray inay ka soo hor muuqdaan garsoore federaali ah oo Mareykan ah oo jooga Miami kaasoo ku hanjabay inuu joojinayo howlaha shirkadda ee Mareykanka dadaal hore oo lagu carqaladeynayo Barnaamijka U Hogaansanaanta Deegaanka. Bishii Juun 2019, Princess iyo Carnival waxaa lagu xukumay inay bixiyaan $20 milyan oo ganaax dambi ah oo ay la socoto kormeerka la xoojiyey ka dib markii ay qirteen xadgudubyada tijaabinta ee loo aaneynayo xubnaha sare ee maamulka Carnival.
"Injineer sir ah" ayaa u sheegay Ilaalada Xeebaha Mareykanka 2013 in markabku uu isticmaalayey "tuubo sixir" si uu u daadiyo qashinka saliidda leh.
Sida laga soo xigtay waraaqo laga gudbiyay maxkamadda, baaritaan dambe ayaa lagu go'aamiyay in Princess Caribbean ay si sharci darro ah u samaynaysay qalab la dhaafo tan iyo 2005, hal sano ka dib markii markabka uu bilaabay shaqadiisa iyo in injineeradu ay qaadeen tallaabooyin ay ka mid yihiin ku socodsiinta biyaha badda nadiifka ah iyada oo loo marayo qalabka markabka. samee rikoor been ah oo dhijitaal ah siidaynta sharciga ah. Baarayaasha ayaa sidoo kale ku eedeeyay in madaxa injineerka iyo injineerka koowaad uu amray in la qariyo, oo ay ku jiraan in laga saaro tuubada sixirka iyo in la faray maamulayaasha hoos yimaada inay been u sheegaan kormeerayaasha UK iyo Mareykanka labadaba kuwaas oo fuulay markabka ka dib warbixinta qarsoodiga.
Marka laga soo tago isticmaalka dhuumaha sixirka si ay uga gudubto kala-soocida biyaha saliidda leh iyo agabka kormeerka waxyaabaha saliidda ku jira, baaritaanka Mareykanka wuxuu daaha ka qaaday laba dhaqan oo kale oo sharci darro ah oo ku saabsan amiiradda Kariibiyaanka iyo sidoo kale afar maraakiibta kale ee Princess, the Star Princess, Grand Princess, Coral Princess iyo Boqorada Dahabka ah. Tan waxa ka mid ahaa furitaanka waalka biyaha milixda ah marka qashinka birta ay farsamaynayso kala-soocida biyaha saliidda leh iyo kormeeraha waxa ku jira saliidda si looga hortago digniinaha iyo sidoo kale sii daynta biyaha xashiishka saliidda leh ee ka imanaya qulqulka taangiyada biyaha cawlan ee ku qulqulaya mashiinnada hawada sare.
Waqtigii qirashada dambiga asalka ah ee Diseembar 2016, Kaaliyaha Xeer Ilaaliyaha Guud Cruden wuxuu yiri "Wasakhowga kiiskan wuxuu ahaa natiijada wax ka badan kaliya jilayaasha xun ee hal markab. Waxay si aad u liidataa uga tarjumaysaa dhaqanka iyo maamulka Princess. Tani waa shirkad si fiican u garatay oo ay ahayd inay si ka sii fiican u qabato."
Bishii Juun 2019, Carnival waxay qiratay inay dembi gashay lix xadgudub oo tijaabo ah. Tan waxaa ka mid ahaa in la farageliyo kormeerka maxkamadeynta ee tijaabinta iyadoo loo dirayo kooxo aan la shaacin maraakiibta si ay ugu diyaariyaan baaritaanada madax-banaan si looga fogaado natiijooyinka xun. Marka laga soo tago ganaaxa $20 milyan ah, maamulka sare ee Carnival ayaa aqbalay mas'uuliyadda, waxay ogolaadeen inay dib u habeyn ku sameeyaan dadaallada u hoggaansanaanta shirkadda, u hoggaansanaanta shuruudaha warbixinta cusub, iyo bixinta kharashaadyo dheeraad ah oo madax-bannaan.
"Laga bilaabo sanadka ugu horeeya ee tijaabada, waxaa jiray natiijooyin soo noqnoqda oo sheegaya in barnaamijka baadhista gudaha ee shirkaddu uu ahaa mid aan ku filnayn," ayay tidhi Waaxda Cadaaladda oo qayb ka ah qirashada cusub ee dembiga.
Hanti-dhawraha madaxa-banaan ee qolo saddexaad iyo kormeeraha ay maxkamaddu magacawday ayaa maxkamadda u sheegay in guul-darrooyinka sii socda “ay ka tarjumayso caqabad qoto dheer: dhaqan doonaya in la yareeyo ama laga fogaado macluumaadka xun, aan ku raaxaysanayn, ama khatar ku ah shirkadda, oo ay ku jiraan hoggaanka sare. " Natiijo ahaan, Noofambar 2021, Xafiiska Asluubtu wuxuu soo saaray codsi ah in laga noqdo tijaabada.
Princess iyo Carnival waxay qirteen heshiiska cusub ee qirashada guuldarada in la dhiso oo la ilaaliyo xafiis baadhiseed oo madax banaan. Princess waxay kaloo qiratay in baarayaasha gudaha aan loo ogolaanin inay go'aan ka gaaraan baaxada baaritaanadooda, iyo in qabyo qoraalka baaritaanada gudaha ay saameyn ku yeesheen oo dib u dhigeen maamulka.
Carnival waxa lagu amray in ay dib u habayn ku sameyso si ay xafiiskeeda baadhistu hadda si toos ah ugu warramaan guddida Guddida Agaasimayaasha ee Carnival. Princess ayaa lagu amray inay bixiso $1 milyan oo ganaax ah oo dheeri ah waxaana looga baahan yahay inay qaado tillaabooyin hagaajin ah si loo hubiyo in iyada iyo Carnival Cruise Lines & plc ay dhisaan oo ay ilaaliyaan xafiiska baadhista gudaha ee madaxa banaan. Maxkamaddu waxay sii wadi doontaa inay qabato dacwadaha heerka saddex biloodlaha ah si loo hubiyo u hoggaansanaanta.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Princess Cruises